Amandla aphezulu, imvamisa ephansi ye-ultrasound - iHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Amandla aphezulu, imvamisa ephansi ye-ultrasound"
I-high-intensity, i-low-frequency ultrasound, eyaziwa nangokuthi yi-high-Power ultrasonics, isetshenziselwa izinhlelo eziningi ezinjengokuxuba kanye nokuxubusha, ukuswilisa okumanzi nokuhlakaza, ukukhipha emulsization, ukukhishwa, ukuhlakazeka kanye nokusabela kwe-sonochemical. I-Ultra enamandla amakhulu yindlela yokuqinisa, edlula izindlela ezijwayelekile ngokuphumela wokusatshalaliswa kosayizi omncane wezinhlayiyana (isb. & i-homogenizing), enikeza isivuno esiphakeme (isib. isizinda se-ultrasonic ne-sonochemistry), isivinini senqubo esisheshayo nokusebenza okulula. Izinzuzo ezengeziwe zokucutshungulwa kwe-ultrasonic ukungqiniswa komugqa kusuka kwelebhu kuye ngosayizi wezimboni; ukuba yinqubo engeyona eyeyokushisa, evimba ukubola okushisayo kwezinto zokwakha ezwela ukushisa; kanye nenketho yezinhlelo ezikhona ezifanelekile zokubuyiselwa emuva kwemiphumela yokuvumelanisa.
I-Hielscher Ultrasonic ifakelwe ukwakhiwa, ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwezinhlelo ezisezingeni eliphakeme ze-ultrasonic ezimboza ububanzi obugcwele kusukela kwelebhu elincane nama-bench-top ultrasonicators kuya ezinhlelweni zokukhiqiza ezinobukhulu obugcwele ngezinqubo zevolumu ephezulu.
Funda kabanzi mayelana nokusetshenziswa kwamandla e-ultrasound nezinzuzo zako!